Obere oge nke Mgbukpọ Rwandan
History & Culture Ndị Mmadụ Dị Mkpa & Ihe Omume
A Short History of the Brutal Egbugbu nke ndị Tutsis site na Hutus
N'April 6, 1994, Hutus malitere igbu ndị Tutsis na mba Afrika nke Rwanda. Ka ndi mmadu na-egbu mmadu a na-egbu mmadu gara n'ihu, uwa guzosiri ike site na ma na-ele anya igbu egbu. Ụbọchị 100 na-adịgide adịgide, mgbukpọ Rwandan hapụrụ ihe dị ka 800,000 Tutsis na ndị Hutu sympathizers nwụrụ.
Ole ndị bụ Hutu na Tutsi?
Ndị Hutu na ndị Tutsi bụ mmadụ abụọ na-agafe agafe. Mgbe mbụ a malitere Rwanda, ndị bi n'ebe ahụ na-azụ ehi.
N'oge na-adịghị anya, a na-akpọ ndị nwere anụ kasị mma "Tutsi" na onye ọ bụla ọzọ a na-akpọ "Hutu." N'oge a, mmadụ nwere ike ịgbanwe ọdịdị dị iche iche site na ịlụ di ma ọ bụ nwunye.
Ọ bụghị ruo mgbe ndị Europe bịara ịchị obodo ahụ na okwu ndị bụ "Tutsi" na "Hutu" na-arụ ọrụ agbụrụ. Ndị Germany bụ ndị mbụ na-achịkwa Rwanda n'afọ 1894. Ha lere ndị Rwand anya anya ma chee na Tutsi nwere àgwà ndị ọzọ Europe, dị ka anụ ọkụ na-abawanye elu na ogo dị elu. Ha si na Tutsis tinye ọrụ.
Mgbe ndị Germany funahụrụ ógbè ha mgbe Agha Ụwa Mbụ gasịrị , ndị Belgian weghaara Rwanda. N'afọ 1933, ndị Belgian kwadoro ụdị "Tutsi" na "Hutu" site n'inye iwu na onye ọ bụla ga-enwe kaadị njirimara nke kpọrọ ha Tutsi, Hutu, ma ọ bụ Twa. (The Twa bụ obere ìgwè nke ndị na-achụ nta anụ na-ebi na Rwanda.)
Ọ bụ ezie na ndị Tutsi bụ nanị ihe dị ka pasent iri nke ndị bi na Rwanda na Hutu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 90, Belgians nyere ndị Tutsi ọnọdụ nile nke ndị ndú.
Nke a na-ewe iwe Hutu.
Mgbe Rwanda gbalịsiri ike ịhapụ Belgium, ndị Belgian gbanwere ọnọdụ nke ìgwè abụọ ahụ. N'ịgbaso mgbanwe nke Hutu malitere, ndị Belgian hapụrụ Hutus, bụ onye mejupụtara ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị bi na Rwanda, na-elekọta ọchịchị ọhụrụ ahụ. Nke a na-ewe ndị Tutsi iwe, na esemokwu dị n'etiti òtù abụọ ahụ gara n'ihu ruo ọtụtụ iri afọ.
Ihe Omume nke Mere Mkpuchi
N'ihe dị ka elekere 8:30 nke ụtụtụ n'April 6, 1994, President Juvénal Habyarimana nke Rwanda na-alaghachi site na nzuko dị na Tanzania mgbe ụgbọ agha dị elu na-efepụ ụgbọelu ya site na mbara igwe n'elu isi obodo Rwanda nke Kigali. Ndị niile nọ n'ụgbọ ahụ gburu na mberede.
Kemgbe afọ 1973, President Habyarimana, Hutu, agbaala ọchịchị aka na Rwanda, bụ nke mere ka ndị Tutsis nile ghara itinye aka. Nke ahụ gbanwere n'August 3, 1993, mgbe Habyarimana bịanyere aka na Arusha Accords, nke mere ka Hutu kwụsị na Rwanda ma nye ndị Tutsis aka iso gọọmentị, nke na-ewe iwe oke ndị Hutu.
Ọ bụ ezie na a chọpụtabeghị onye bụ n'ezie onye e gburu egbu, ndị Hutu extremists bara uru karịa ọnwụ Habyarimana. N'ime awa iri abụọ na anọ mgbe ọdachi ahụ gasịrị, ndị Hutu extremists ewerewo gọọmenti, boro ndị Tutsis ikpe maka igbu mmadụ, wee malite igbu mmadụ.
Ụbọchị 100 nke igbu egbu
Ogbugbu a malitere na isi obodo Rwanda nke Kigali. The Interahamwe ("ndị na-egbu dị ka otu"), òtù ndị ntorobịa Tutsi nke ndị ntorobịa Hutu guzobere, guzobere ụzọ mgbochi. Ha na-elele kaadị njirimara ma gbuo ndị niile Tutsi. A na-eme ihe ka ọtụtụ n'ime igbu ndị ahụ na machetes, klọb, ma ọ bụ mma.
N'ime ụbọchị na izu ole na ole sochirinụ, e guzobere ụzọ ntinye na Rwanda.
N'April 7, ndị òtù Hutu malitere ịkwado ọchịchị nke ndị mmegide ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha, nke pụtara na e gburu Tutsis na Hutu moderates. Nke a gụnyere praịm minista. Mgbe onye iri nke Belgian UN na-agba mbọ ichebe praịm minista, ha gburu ha. Nke a mere ka Belgium malite ịhapụ ndị agha ya na Rwanda.
N'ime ọtụtụ ụbọchị na izu ole na ole sochirinụ, ime ihe ike na-agbasa. Ebe ọ bụ na gọọmentị nwere aha na adreesị nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị Tutsis bi na Rwanda (cheta, onye ọ bụla Rwandan nwere kaadị njirimara nke kpọrọ ha Tutsi, Hutu, ma ọ bụ Twa) ndị na-egbu mmadụ pụrụ ịga n'ọnụ ụzọ, na-egbu ndị Tutsis.
Egburu ndị ikom, ndị inyom, na ụmụaka. Ebe ọ bụ na bọl dị oké ọnụ, ọtụtụ ndị Tutsis gburu ngwá agha, na-ejikarị aka ma ọ bụ klọb.
Ọtụtụ mgbe a na-ata ahụhụ tupu e gbuo ha. E nyere ụfọdụ n'ime ndị ahụ a na-ahụ maka nhọrọ maka ịkwụ ụgwọ maka mpempe akwụkwọ ka ha nwee ike ịnwụ ngwa ngwa.
N'oge a na-eme ihe ike, e dinara ọtụtụ puku ndị Tutsi. A dinara ụfọdụ n'ime ha wee gbuo ha, ndị ọzọ nọkwa na-enwe mmekọahụ dị ka ndị ohu ruo izu. A na-ata ụfọdụ ụmụ nwanyị na ndị Tutsi ahụhụ tupu e gbuo ha, dị ka ịkpụcha obi ha ma ọ bụ jiri ihe ndị dị nkọ kpuchie ikpu ha.
Na-egbugbu n'ime ụlọ ụka, ụlọ ọgwụ, na Ụlọ Akwụkwọ
Ọtụtụ puku ndị Tutsis gbalịrị ịgbapụ site n'ichebe na chọọchị, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, na ụlọ ọrụ gọọmentị. Ebe ndị a, ebe ọ bụbu akụkọ ntụrụndụ bụ ebe mgbaba, ghọrọ ebe a na-egbu ọchụ n'oge agha mgbukpọ Rwandan.
Otu n'ime mgbuchapụ kachasị njọ nke mgbukpọ Rwandan mere na Eprel 15 ruo 16, 1994 na Nyarubuye Roman Catholic Church, nke dị ihe dị ka kilomita 60 n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Kigali. N'ebe a, onyeisi obodo obodo ahụ, bụ Hutu, gbara ndị Tutsis ume ka ha chọọ ebe nsọ n'ime ụka ahụ site n'ịgba ha nkwa na ha ga-enwe nchebe n'ebe ahụ. Mgbe ahụ onyeisi obodo ahụ raara ha nye ndị òtù Hutu.
Ọnwụ ahụ malitere na grenades na egbe ma n'oge na-adịghị anya, ọ gbanwere machetes na klọb. Igbu aka na-egbu egbu, ya mere ndị ohi ahụ gbanwere. O were ụbọchị abụọ igbu ọtụtụ puku ndị Tutsi ndị dị n'ime.
Ogbugbu ndi ozo di otua mere na Rwanda, tinyere otutu n'ime ihe kachasi ike n'agbata April 11 na mmalite May.
Mmegbu nke Ndị Corps
Iji mekwuo ndị Tutsi, ndị òtù Hutu agaghị ekwe ka ndị Tutsi nwụọ.
A hapụrụ ozu ha ebe a na-egbu ha, gosipụtara ihe ndị ahụ, anụ oke na nkịta riri.
A tụbara ozu ndị Tutsi n'ime osimiri, ọdọ mmiri, na iyi iji zipụ ndị Tutsis "laghachi na Etiopia" - na-ezo aka na akụkọ ifo na ndị Tutsi bụ ndị mba ọzọ ma si Ethiopia bịa.
Ndị Mgbasa Ozi Na-arụ Ọrụ Dị Oké Mkpa na Mgbukpọ
Ruo ọtụtụ afọ, akwụkwọ akụkọ "Kangura " nke ndị Hutu na - achịkwa, na - ekwupụta ịkpọasị. N'ihe dị ka December 1990, akwụkwọ akụkọ ahụ bipụtara "Iwu Iri ahụ maka Hutu." Iwu ndị ahụ kwuru na onye ọ bụla Hutu onye lụrụ Tutsi bụ onye nchụso. Ọzọkwa, ọ bụla Hutu bụ onye na-azụ ahịa na Tutsi bụ onye sabo. Iwu ndị ahụ siri ọnwụ na ọnọdụ niile dị n'usoro na ndị agha niile ga-abụ Hutu. Iji mee ka ndị Tutsis dị iche iche, iwu ndị ahụ gwakwara Hutu ka o guzoro n'akụkụ Hutu ọzọ ma kwụsị inwe obi ebere n'ebe ndị Tutsi nọ. *
Mgbe RTLM (Radio Televison des Milles Collines) malitere ịkụsa na July 8, 1993, ọ gbasaa ịkpọasị. Otú ọ dị, n'oge a, a kwakọbara ya ka ọ kpọọ ndị mmadụ site n'inye egwu na mgbasa ozi ndị a na-ewu ewu na mkparịta ụka na-ezighị ezi.
Ozugbo igbu ndị ahụ malitere, RTLM agafeghị nanị ịkpọ asị; ha weere òkè dị egwu n'igbu. RTLM kpọrọ Tutsi ka ọ "gbutuo osisi ndị toro ogologo," nkebi ahịrịokwu nke pụtara Hutu ịmalite igbu Tutsi. N'oge mgbasa ozi, RTLM na-ejikarị okwu bezizi ("cockroach") mgbe ọ na-ezo aka na Tutsis ma gwa Hutu ka ọ "kpochapụ ihe mgbu."
Ọtụtụ mgbasa ozi RTLM kwupụtara aha ụfọdụ ndị a ga-egbu; RTLM gụnyere gụnyere ozi gbasara ebe ị ga-ahụ ha, dị ka ebe obibi na adreesị ọrụ ma ọ bụ ihe ndị a maara. Ozugbo e gburu ndị a, RTLM kwupụtara ọkwa ha na redio.
Ejiri RTLM kpalie Hutu ka o gbuo. Otú ọ dị, ọ bụrụ na Hutu jụrụ itinye aka na igbu ahụ, ndị òtù nke Interahamwe ga-enye ha nhọrọ - ma ọ bụ igbu ma ọ bụ gbuo.
Ụwa kwadoro site na dị nnọọ nyochaa
Mgbe Agha Ụwa nke Abụọ na Oké Mgbukpọ ahụ gasịrị , òtù Mba Ndị Dị n'Otu nakweere mkpebi na Disemba 9, 1948, bụ nke kwuru na "Ndị na-eme nkwekọrịta ahụ kwadoro na mgbukpọ ahụ, ma ọ bụ ime n'oge udo ma ọ bụ n'oge agha, bụ mpụ n'okpuru iwu ụwa. ha na-amalite igbochi ma na-ata ahụhụ. "
O doro anya na mgbuchapụ ndị dị na Rwanda bụ mgbukpọ, n'ihi ya, gịnị mere ụwa ejideghị iji kwụsị ya?
Enwere otutu nnyocha na ajụjụ a. Ụfọdụ ndị ekwuola na ebe ọ bụ na e gburu Hutu n'oge mbụ, ụfọdụ mba kwenyere na esemokwu ahụ ga-abụ agha karịa agha kama ịmalite mgbukpọ. Nchọpụta ndị ọzọ egosiwo na ike ụwa dị na ya bụ mgbukpọ kama na ha achọghị ịkwụ ụgwọ maka ihe ndị dị mkpa na ndị ọrụ iji kwụsị ya.
N'agbanyeghị ihe kpatara ya, ụwa ga-abanye ma kwụsịrị igbu ya.
Mkpuchi ikpe nke Rwanda
Ogbugbu nke Rwanda gburu naanị mgbe RPF weghaara mba ahụ. RPF (Front Rivandan Patriotic Front) bụ otu ìgwè ndị agha a zụrụ azụ gụnyere ndị Tutsis bụ ndị a chụgara na mbụ, ọtụtụ n'ime ha bi na Uganda.
RPF nwere ike ịbanye na Rwanda ma jiri nwayọọ nwayọọ wepụ mba ahụ. Na ufọt ufọk July 1994, mgbe RPF nwere njide zuru oke, e mesịrị kwụsị mgbukpọ ahụ.
> Akwụkwọ Iwu Iri nke Hutu "ka e depụtara na Josias Semujanga, Origins nke Mgbukpọ Rwandan (Amherst, New York: Humanity Books, 2003) 196-197.
Ihe Omimi I Kwesịrị Ịmata Banyere Ụbọchị Nraranye
Ndị a ma ama na narị afọ nke 20
A Profaịlụ nke Eze Byzantium Alexius Comnenus
Profaịlụ nke Beatles
Biography nke Jane Goodall
Eze Francis I nke France
Ịjụ - ịjụ
Ole ndị bụ ndị mmụọ ozi kachasị mkpa?
Ngwakọta Ngwakọta Kọmpụ
Ihe omuma nke Sally Jewell, onye odeakwụkwọ nke United States
Akwụkwọ akụkọ banyere Igwu Mmiri
Top Berlin Songs nke '80s
Nchọpụta nsogbu Nsogbu na steering na nkwusioru
Egwuregwu Egwuregwu na C - Nkuzi 1 Star Empires
8 Ezigbo Movies Rita Hayworth
Ịmụ nwa na ime baptizim
21 Great Digimon Anime na-ekwu na Oke Ekekọrịta
Uzo iri di iche iche iji mee Litha
Navaratri: Ụtụtụ nke Chineke
Nnukwu Ụlọ Akwụkwọ Ọchịchị Mahadum Wake
Nsogbu Nkwupụta Ezigbo Eke
Ezigbo oke anumanu
Ugwu Kosciuszko: Ebe kachasi elu na Australia
Kedu ihe bụ "Njọ Ọjọọ," na Gịnị Bụ Ụgwọ Ahụ maka Egwuregwu Otu?
Na-ere Mkpụrụ Mpempe ma ọ bụ Akụkụ Ulo na Ịntanetị: Atụmatụ maka Ịchọta Dollar Kacha
Ịgba afa na nkume
Ụmụ nwanyị na Zika Virus
Egwuregwu Kọmputa Stepladder
NASCAR Ijeghari ma Sochie Ogologo
Akụkọ banyere ụda
Otu esi eji akwa igwe akwa